dayniile » Boosaaso oo lagu qabtay qarax tankiisa lagu sheegay 100 KG
Boosaaso oo lagu qabtay qarax tankiisa lagu sheegay 100 KG
Saraakiisha Ciidanka ammaanka ee Puntland ayaa Sheegay in ay ka hor tageyn Qarax la dhigay isgoyska Gaaca ee magaalada Bosaso ee xarunta gobolka Bari ee Puntland kaas oo la doonayay in Shacab lagu qarxiyo sida ay sheegeen Laamaha ammaanka.
Sida uu Warbaahinta u sheegay Taliyaha qeybta Booliska Gobolka Bari Qaraxan in uu ahaa mid tankiisa uu weyn yahay, balse ay suurtagashay inta aan dhibaato lagu gaarsiin shacabka ay Ciidamada ammaanka qabteen.
Wuxuu kaloo sheegay Taliyaha in weli ay socdaan Howlgalada ay wadaan Ciidamada ammaanka lagu xaqiijinayo, wixii ku soo kordhana warbaahinta ay dib uga soo sheegi doonaan, isaga oo faah faaahsan.
Qaraxa la qabtay ayaa tankiisa lagu qiyaasaa 100 kg sida ay sheegeen Saraakiisha amaanka ee Maamulka Puntland ee ku sugan magaalada Boosaaso ee Xarunta Gobalka Bari.
Qaraxaan ayaa la sheegay in ay abaabuleen Al-Shabaab, magaalada Boosaaso ayaa ka mid ah meelaha inta badan ay ka dhacaan Qaraxyada iyo dilalka rayidka ah iyo sidoo kale dilalka loo geesto Mas’uuliyiinta Puntland.